အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Jan 29, 2010
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, January 29, 2010 Friday, January 29, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့တော့ စာလာဖတ်ကြတဲ့ သူတွေကို ကျွန်မက ဟင်းချက်နည်းတစ်မျိုး ပြောပြပါ့မယ်.. ဘာဟင်း ချက်မယ်လို့များ ထင်ကြပါသလဲရှင်… မနေ့က တင်တဲ့ပိုစ့်မှာ ကျွန်မ ဖမ်းမိ လာတဲ့ ၀က်ဝံသားတော့ မဟုတ်ပါဘူး… mylovecafe က စာရေးဖော် သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မ ၀က်ဝံတစ်ကောင် ဖမ်းမိလာတယ် ကြားတော့ အသီးသီး ရောက်လာပြီး တစ်ယောက် နည်နည်းစီ တောင်းယူ သွားကြပါတယ်… mylovecafe Admin ကြီးကတော့ ၀က်ဝံခေါင်း ယူပါတယ်.. သူ့အိမ်မှာ အလှချိတ်မလို့ပါတဲ့... ပြောရဦးမယ်… ကျွန်မနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မကေနဲ့ မမြသွေးနီကတော့ ၀က်ဝံ ခြေသည်း စွပ်ပြုတ် စားချင်လို့ပါ ဆိုပြီး ခြေသည်းတွေ တောင်းယူ သွားပါတယ်.. ဟို မာတီပလိုင်း ကိုဇော်ဆိုပြီး နံမည်ကြီးနေတဲ့ တစ်ယောက်က ၀က်ဝံ အရေခွံ လေး သူ ယူပါရစေတဲ့… ၀က်ဝံအရေခွံ ခြုံပြီး နေရင် သူ့ကိုယ်သူ ပိုလုံခြုံမယ် ထင်လို့ပါတဲ့.. ကြည့်ရတာ ဈေးကောင်းရင် ထုတ်ရောင်းဖို့ ထင်ပါရဲ့.. ကျွန်မ ကလဲ သူတောင်းတာ ပေးလိုက် ပါတယ်.. နောက် ဒေါက်တာလေး ဇီဝက ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဆရာဝန် ဆိုတော့ ၀က်ဝံ သည်းခြေကို တောင်းပါတယ်… ၀က်ဝံ သည်းခြေက ဆေးဘက် ၀င်တယ် လေ.. သူက ဆေးဖော်မယ် ထင်ပါရဲ့…. ဒါတောင် ဒေါက်တာ ပန်းရင့်ရောင်နဲ့ တစ်ဝက်စီ ခွဲရမှာ… ဒေါက်တာ သက်တန့်ချို ကတော့ ဘယ်ပျောက် နေတယ်မသိ.. ရောက်မလာ ပါဘူး.. နောက်ကျမှ ရောက်လာပြီး လာတောင်းရင် ၀က်ဝံအမွှေး လေးတွေ သိမ်းထားတာ ရှိသေးတယ်.. သူ့ကို နည်းနည်းခွဲပေးလိုက်ပါမယ်.. ခေါင်းအုံးထဲ ထည့်လို့ရတာပေါ့.. မှို့ မလိုတော့ဘူးလေ… ကိုနွေဆူး ၊ ကိုဏီလင်းညို၊ ကိုမြစ်ကျိုးအင်း၊ ကိုမင်းသုခ၊ ကိုလင်းကြယ်ဖြူ၊ ကိုဂျေဂျူ၊ ကိုဇာဏီ၊ ကိုလေတံခွန်၊ ကိုအင်းသားလေး၊ ကိုချမ်းလင်းနေ၊ ကိုအညာသားလေး နဲ့ ကိုဇော်သိင်္ခ တို့ကို ၀က်ဝံ ခြေထောက်နဲ့ လက်၂ချောင်း လက်ဆောင် ပေးလိုက်တယ်… အမြည်းလုပ်လို့ ရတာပေါ့နော်… မဟုတ်လဲ ပီယဆေး ဖော်ချင်ဖော်ပေါ့...
အင်ကြင်း၊ သဒ္ဓါ၊ နှင်းဟေမာ၊ အဖြူရောင် နတ်သမီး၊ ၀ိုင်း၊ မေလေး၊ မ၀ါ၊ မေခင်မွန်း၊ သိင်္ဂါ၊ မေကျော်၊ မချစ်ကြည်၊ မြလေးသျှင်၊ တောသူမလေး၊ လုံမလေးတို့ အတွက်တော့ ၀က်ဝံဆီ ထုတ်ပြီး ပေးလိုက်ပါတယ်.. ၀က်ဝံဆီ က ဆံပင်ကို သန်စွမ်းနက်မှောင် စေတယ်လေ… ကျန်နေ သေးတဲ့ စင်္ကာပူက စာရေးဖော် တစ်ချို့ကလဲ သတင်းကြားတာနဲ့ ရောက်ဖြစ်အောင် ရောက်လာပြီး မိုက်ကြေး လာခွဲကြသေးတယ်.. သူတို့ကိုတော့ ၀က်ဝံ နားရွက် ပေးလိုက် ပါတယ်.. ၀က်သားဒုတ်ထိုးကို လွမ်းနေကြသူတွေ ဆိုတော့ ၀က်ဝံ နားရွက်ကို ဒုတ်ထိုး လုပ်ချင် လုပ်ကြမှာ.. နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဘလောဂ့်ရေးဖော် တွေကလဲ ၀က်ဝံသား မစားဖူး လို့ပါ.. နည်းနည်းလောက် မျှပါနဲ့ လာတောင်းကြတယ်…. ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မမှာ ဘာမှ မကျန်ရစ် တော့ပါဘူး… ဒါတောင် မရလိုက်လို့ စိတ်ကောက်တော်မူ ကြတဲ့ လူတွေက ရှိပါ သေး တယ်.... ဒါနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ ကြက်သားကို အကောင်းဆုံး ချက်စားရ တော့တာ ပေါ့နော်…
ဟင်းချက်နည်း စပါမယ်.... ကျွန်မက ကချင်ပြည်နယ်သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်မှာ နံမည်ကြီးတဲ့ ကြက်သားကချင်ချက် ချက်နည်းကို မျှဝေပါမယ်… ကြက်သား၊ ငါး ၊၀က်၊ အမဲ ကြိုက်နှစ် သက်ရာ အသားကို ယခုနည်းအတိုင်း ချက်လို့ရပါတယ်.. ၀က်ဝံသားတော့ ကချင်ချက် ချက်လို့ ရမရ ကျွန်မ မသိပါဘုးရှင်….
ပထမဦးစွာ အသားကို ရေစင်စင်ဆေး ( ရေမဆေးဘဲ ချက်လိုက ချက်ပါ :) )၊ ပြီးတော့ အနေတော် အတုံးလေးများ တုံးပါတယ်..
ကြက်သွန်နီ ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ် သီးများ ကို ခပ်နှုပ်နှုပ်လေး စင်းပါတယ်… ကချင်ချက်ရဲ့ အရသာသည် ချဉ်ချဉ် စပ်စပ်ကို ဦးစားပေးတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ငရုပ်သီး ခပ်များများ ထည့်ဖို့ လိုပါတယ်… ထို့နောက် ဖက်ဖယ်ရွက်၊ နံနံပင်၊ ပင်စိမ်း၊ စသဖြင့် အမွှေးအကြိုင် အရွက်များကို စင်းပြီး ထည့်ပါတယ်.. ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ ဖက်ဖယ် ရွက်ကို အဓိက ထားပြီး ထည့်ပါတယ်… ဖက်ဖယ်ရွက်ကို ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က လူတွေသာ သိကြတာ များပါတယ်.. မမြင်ဖူးသူများ အတွက် ပုံလေးပါ ထည့်ပေး လိုက်ပါ တယ်…. ရန်ကုန်မှာတော့ တရုတ်တန်းဈေးမှာ ၀ယ်ယူလို့ ရပါတယ်… တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ တော့ ရှိမရှိ ကျွန်မ မသိပါ…
အပေါ်ဆုံးက အရွက်က ဖက်ဖယ်ပါ..အောက်မှာတော့ ကုလားနံနံ၊မြန်မာနံနံ အစုံပါပါတယ်..
ဖက်ဖယ်ရွက် မရှိလဲ ကျန်တဲ့ နံနံရွက်တွေ ထည့်ချက်လို့လဲ ရပါတယ်… ချဉ်စော်ကားသီး၊ မက်လင်ချဉ်သီး စတဲ့ အချဉ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး အခြောက်လုပ်ထားတဲ့ အချပ်လေးတွေကို သေးသေး ပါးပါးလှီးပြီး ထည့်ပါတယ်.. ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ မက်လင် ချဉ်သီးကို သာ အသုံးများပါတယ်… အသီး အခြောက် မရှိပါက အသီးစိမ်းကို အတုံးသေးသေး လေးများတုံးပြီး ထည့်ချက်လို့ရပါတယ်.. နောက်ဆုံး ချဉ်စော်ကားသီးရော မက်လင်ချဉ် သီးရော မရှိတဲ့ အရပ်မှာ ရောက်နေရင် သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်လိုက်ပါ…. ဘာဘဲ ထည့်ထည့် ချဉ်ဖို့ အဓိကပါ… ခန့်မှန်းပြီးတော့ ထည့်ပါနော် .. ချဉ်လွန်းလို့ သွားကြိမ်းပြီး ထမင်းမစား နိုင်တော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့…
ပြီးတော့ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ အရောင်တင်၊နနွင်းမှုန့် ၊ဆီ အနည်းငယ်စီ ထည့်ပြီး နယ်ပါ… မနယ်ဘဲ အိုးထဲ အားလုံးပေါင်းထည့်ကာ ရေထည့်ပြီး တည်လဲ ဖြစ်ပါတယ်… မီးဖိုပေါ်တင်လိုက်ပြီး ရေ အနေတော် ထည့်ပါ.. အတန်ကြာထားပြီး အသားနူးမနူး၊ အပေါ့ အငံ အချဉ်အစပ် အနေတော် ဟုတ်မဟုတ် မြည်းစမ်းကြည့်ပါ… စိတ်ကြိုက် အရသာ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ဖြစ်ပြီ ၊အသားလဲ နူးပြီဆိုရင်တော့ မွှေးကြိုင်ပြီး ချဉ်စပ်အရသာရှိတဲ့ ကြက်သား ကချင်ချက်ဟင်း ရပါပြီ…
ကြက်သားကချင်ချက်ပါ.. ဒီပုံမှာ ဆီအနည်းငယ်များပါတယ်.. ဟင်းချက်ရင် ဆီနည်းနည်းသာ ထည့်ဖို့ လိုပါတယ်..
အရည်လေးနဲ့ စားချင်သူများ ရေခမ်းမချက်ဘဲ အရည် အနည်းငယ် ချန်ထားလို့ပါတယ်.. ဒါက ကျွန်မတို့ ချက်စားနေကြ ကချင် ချက်နည်းပါ.. တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချက်ပုံချက်နည်း နည်းနည်းတော့ ကွာမယ်ထင်ပါတယ်… ၀က်ဝံသား မစားရ၍ ကြက်သားကို ချက်စား လိုက်ရပါကြောင်း…. အမြည်းကြိုက်သူများ အတွက်လဲ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း..
အပေါ်ဆုံး စာပိုဒ်သည် ခင်မင်ရင်းနှီး၍ စနောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်… ခွင့်လွှတ် တော်မူကြ ပါကုန်....